AdminPermalink Reply by Myanmar Network Forum Moderator3 on August 25, 2015 at 17:08
Myanmar Network တွင် စိတ်ဝင်စားဖွယ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများ မြောက်များစွာ ရှိပါတယ်။ Myanmar Network သည် mobile phone များနှင့်သုံးပါက လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာသုံးနိုင်သည့် website အမျိုးအစား ဖြစ်သောကြောင့် မည်သည့်အချိန်မဆို လာရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဆောင်းပါးများ၏ အညွှန်းကို ဤ link တွင် သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Permalink Reply by Arkar Kyaw on August 22, 2015 at 13:38
AdminPermalink Reply by Myanmar Network Forum Moderator3 on August 25, 2015 at 17:31
Thank you ko Arkar Kyaw. We are glad that you like it.
Permalink Reply by u ba gyi on August 24, 2015 at 9:57
ကျနော်သည် အရွယ်လွန်ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရေးကို ယခုမှစတင်နေရသော ပြည်ပရောက်နေသူဖြစ်ပါသည်။ ဤကဏ္ဍ၌ သိလိုသည့်အရာများ ပါဝင်မေးမြန်းခွင့်ရနိုင်ပါသလား။ ရသည်ဆိုပါက သက်ကြီးအရွယ်များ အွန်လိုင်းမှ ဘွဲ့ရသည်အထိ သင်ယူနိုင်သောလမ်းကြောင်းများရှိပါက ညွှန်ပြပေးစေလိုပါသည်။ ယခုအစီအစဉ်ကိုတာဝန်ယူနေသူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်လေးစားလျက်ပါ။
Permalink Reply by Zin Maw Oo on August 24, 2015 at 10:15
Interesting question for adults! Waiting to hear the best answer for U Ba Gyi's question.
AdminPermalink Reply by Myanmar Network Forum Moderator3 on August 25, 2015 at 16:48
ဤကဏ္ဍမှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဆိုင်ရာ အမေးအဖြေကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းမှ ဘွဲ့ရသည်အထိ သင်ယူနိုင်သော လမ်းကြောင်းနှင့် ပတ်သက်သော သိလိုသည်များကို သက်ဆိုင်ရာ ပညာရေးအေဂျင်စီများနှင့် တက်ရောက်လိုသည့် တက္ကသိုလ်များ၏ ဝက်ဗ်ဆိုက်များတွင် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Permalink Reply by Ko Oo on August 27, 2015 at 10:13
Dear U Ba Gyi, here, some of free online learning sources: http://uopeople.edu/ http://ocw.mit.edu/ http://academicearth.org/. May be easy to learn.
Permalink Reply by u ba gyi on August 31, 2015 at 9:20
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Ko Oo ခင်ဗျာ
Permalink Reply by winsithu on August 25, 2015 at 16:38
အလယ်​တန်းဆင့်​အင်္ဂလိပ်​စာသင်​ကြား​ရေးနဲ့ ပတ်​သက်​ပြီး ဘယ်​လိုစာအုပ်​ရနိုင်​မလဲခင်​​ဗျာ။ Teacher Guideလိုမျိုး​ပေါ့။
AdminPermalink Reply by Myanmar Network Forum Moderator3 on August 25, 2015 at 16:51
ဤကဏ္ဍမှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဆိုင်ရာ အမေးအဖြေကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကြားရေးဆိုင်ရာ စာအုပ်များကို သက်ဆိုင်ရာ စာအုပ်ဆိုင်များနှင့် ဝက်ဗ်ဆိုက်များတွင် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Permalink Reply by Ko Oo on August 26, 2015 at 14:51
I've waited foralong time like that. Thanks in deed. အသုံးများတဲ့ မြန်မာဆိုရိုး(အီဒီယံ) တွေကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ တွဲပြီး လေ့လာလိုပါတယ်။ (ဥပမာ- သဲထဲရေသွန် လို့မြန်မာကဆိုရင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှာ Go up in smoke လို့မှတ်သားဖူးပါတယ်။ ဆုပ်လည်းစူး၊ စားလည်းရူး၊ ဖောင်စီးရင်းရေငတ်၊ မျက်လုံးဒေါက်ထောက်ကြည့်၊ မျက်စိစပါးမွှေးစူး၊ အစရှိတဲ့ နောက်ထပ်အသုံးတွေကို ကျေးဇူးပြုပြီး လေ့လာပါရစေ..)
AdminPermalink Reply by Myanmar Network on August 27, 2015 at 15:09
Thank you for your comment. We have sent your request to the teachers.